माइक्रोसफ्टका कर्मचारीले स्थायी रुपमै घरबाट काम गर्न पाउने !!! - Sajha Entertainment
Home/फोटो/माइक्रोसफ्टका कर्मचारीले स्थायी रुपमै घरबाट काम गर्न पाउने !!!
माइक्रोसफ्टका कर्मचारीले स्थायी रुपमै घरबाट काम गर्न पाउने !!!
Sharmila Gurung Send an email २५ आश्विन २०७७, आईतवार १४:०९
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वका धेरै दिग्गज कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कार्यालय नआइकन घरबाटै काम गर्न पाउने अर्थात् ‘वर्क फ्रम होम’को सुविधा दिइरहेका छन् ।
विप्लव समूहसँग मिलेर २० राजनीतिक संगठनले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने !!!
सुर्खेतमा ६५ वर्षीया कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु !!!